मलेसियामा रहेका नेपालीको तलब बढ्ने कुरा हल्ला मात्रै ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मलेसियामा रहेका नेपालीको तलब बढ्ने कुरा हल्ला मात्रै ?
मलेसियाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक वृ,द्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।मलेसिया सरकारले अघिल्लो बर्ष अ”क्टोबरमा घोषणा गरिएअनुसार एक सय रिंगिटले वृ:द्धि भएको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक पुनः वृ:द्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएको छ ।
तर त्यबारेमा मलेसिया सरकारले कुनै आधिकारिक रुपमा बोलेको भने छैन । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घरेलु क्षेत्रमा कार्यरत कामदार सहित सबै कामदारका हकमा उक्त नयाँ पारिश्रमिक लागू हुनेछ । मलेसियामा कामदारको तलब मासिक कतिले वृ:द्धि हुनेछ भन्ने कुराहरु समाचार ए”जेन्सिले खोलुलाएको भने छैन ।
समाचार एजेन्सीहरुले बताए अनुसार मलेसियामा लागू भएमा अब मलेसियामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै स्थानीय र विदेशी दु”बैखाले कामदारले बढेको पारिश्रमिक पाउनेछन् । यो नीति पूर्ण रुपमा लागू भएमा यहांका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत ५ लाखभन्दा बढी नेपाली यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । मलेसियाले गत सन् २०१२ मे दिवसको अवसर पारेर पहिलोपटक न्युनतम पारिश्रीमक लागूसम्बन्धी नीति घोषणा गरेको थियो ।